April 22, 2018 Posted by Jhilko.com
बेनी, म्याग्दी । म्याग्दीको एउटा गाउँबाट रोजगारका लागि प्रवासमा गएका व्यक्तिले रु एक करोड २५ लाख लगानीमा आठ किलोमिटर मोटरबाटो निर्माण गरी गाउँलाई सडक सञ्जालसँग जोडेका छन् । रघुगंगा गाउँपालिका–१ बेगखोलाबाट रोजगारका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेका बेगखोलेवासीले रु एक करोड २५ लाख जुटाएर बेग र बाँदुक गाउँलाइ जोड्ने आठ किमी सडक निर्माण गरेका हुन् । बेगखोला–देउराली–बेग—बादुक गाउँ जोड्ने यो सडकमा सरकारी लगानी भने छैन । हिउँद–बर्खा नियमित सवारी चल्ने...बाँकी
अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाको ट्राञ्जिट बन्ला त नेपाल ?
November 16, 2017 Posted by Jhilko.com
अमेरिकाबाट नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजमा नेपाल जान पाए कस्तो हुन्थ्यो ? अमेरिकालगायत धेरै देशमा बसोबास गर्ने नेपालीको मनमा आउने प्रश्न हो यो । आफ्नै देशको जहाज, यात्राभर आफ्नै भाषाशैली, आफ्नै गीत–संगीत, आफ्नै पाराका खानेकुरा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई यो भन्दा अरु यात्राभर खुसीको कुरा के होला ? नेपाल वायु सेवा निगमले यस्ता खालका योजना त बनाउने गर्छ तर व्यवस्थापन निकै कमजोर छ । त्यसैले आमनागरिकको सहजै उत्तर आउँछ त्यो दिन आउला र ? आफ्नै देशको जहाज, आफ्नै भाषा र भेषमा रहेका एयर होस्टेजको स्वागत...बाँकी
मेलबर्नमा पहिलो पटक नेपाल सम्बत कार्यक्रम
October 24, 2017 Posted by Jhilko.com
२३ अक्टोबर, फूटस्क्रे पार्क, मेलबर्न । संस्थागत रुपमा मेलबर्नमा पहिलो पटक नेपाल सम्वत मनाइएको छ । नेवा एसोशियसन अफ अस्ट्रेलियाले मेलबर्नको फूटस्क्रे पार्कमा आयोजना गरेको ११३८ औं नेपाल सम्बत लुम्बिनी-कपिलवस्तु दिवस अभियानका विस्व संयोजक रामकुमार श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा बिभिन्न संस्थाको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा उपस्थित सबैलाई नेवारी परंपरा अनुसार सगुन दिएर शुरु गरिएको थियो । लुम्बिनी-कपिलवस्तु दिवस अभियानका विस्व संयोजक रामकुमार श्रेष्ठले राजा राघवदेवको शासनकालमा ऋणमा डुबेका देशबासीलाई...बाँकी
October 23, 2017 Posted by Jhilko.com
६ कात्तिक, टोकियो । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष भवन भट्टले उज्यालो नेपाल अभियानको सहकार्यमा सहभागी हुन जापानवासी नेपालीलाई आग्रह गरेका छन् । भट्टको स्वागतमा एनआरएनए जापानका पदाधिकारीले आइतबार गरेको कार्यक्रममा दुई वर्षभित्रमा उज्यालो नेपाल बनाउन सहकार्य आवश्यक भएको भन्दै यसमा सहभागी बन्न आग्रह गरे। अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि पहिलोपटक कर्मभूमि जापान आएका भट्टले हानेदा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन्। विदेशमा भएका...बाँकी
विदेशी भूमिबाट नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई चिठी
October 12, 2017 Posted by Jhilko.com
नेपालमा बर्षेनी करीब छ देखि सात लाख युवा युवतीहरू देश छोडेर अर्को देशमा कमाउनको लागि जाने गर्दछन । सायद यो कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई अवगत नै होला । आफ्नो देशमा राजनैतिक दलहरुको खिचातानीले सोचे जस्तो राम्रो काम नपाएर, परिवारिक जिम्मेवारी अथवा भनौ मिहेनत अनुसार कमाई नहुनाले युवाहरू बैदेशिक रोजगार तिर आकर्षित हुँदै गएका छन । त्यतिमात्र होइन पढेलेखेका युवाहरु पनि खाडीको ५० डिग्री तापक्रममा विवश छन् । मध्यम वर्गका युवा युवतीहरु स्वदेशको पढाईलाई लत्याउँदै विद्यार्थी भिषामा विदेशतिर होम...बाँकी
October 09, 2017 Posted by Jhilko.com
किरण भट्टराई काठमाडौँ । अध्ययनका लागि २० वर्षअघि जापान पुग्नुभएका गोरखाका भवन भट्ट अहिले जापानमा सफल व्यवसायीका रुपमा स्थापित हुनुभएको छ । अथक मेहनत र संघर्षको फल मीठो हुन्छ भन्ने प्रतिनिधि पात्रका रुपमा उहाँको पहिचान बनेको छ । जापान गएपछि सुरुआती चरणमा रेस्टुराँमा भाँडा माझ्ने काम गर्नुभएका भट्टको अहिले जापानमा मात्रै २९० होटल तथा रेस्टुराँ सञ्चालनमा छ । उहाँका रेस्टुराँमा अहिले पाँच हजार जापानी र २५० नेपालीले रोजगारी पाएका छन् । सन् १९९७ मा २१ वर्षको उमेरमा टोखाइ विश्वविद्यालयमा...बाँकी
को बन्ला एनआरएनए अध्यक्ष ?
September 20, 2017 Posted by Jhilko.com
काठमाडौं । आगामी दिनमा हुने गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सम्मेलनमा अध्यक्ष पदमा भवन भट्ट र जमुना घले भिड्ने सम्भावना रहेको छ । यसअघि भवन भट्ट र कुमार पन्तको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने भन्ने चर्चा एकाएक बदलिएको छ । अध्यक्ष पदमा भट्ट र कुमार पन्त उठ्ने चर्चा भए पनि त्यो सम्भावना टरेको छ । चर्चामा नआएकी घले उठ्ने सम्भावना बढेपछि पन्तले भट्टलाई समर्थन दिने चर्चा छ । जमुना घले आफ्नो उम्मेदवारीको बारेमा मतदाताको मन छाम्दै आज बुधवार दुबई आइपुग्दै छिन । यसअघि उनी क्यान...बाँकी
एनआरएनए यूरोप बैठक : पशुपतिको यात्रा सिद्राको व्यापार
July 05, 2017 Posted by Jhilko.com
गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशनको तयारी तीब्र गतिमा अगाडि बढेको छ । जुलाईको अन्तिममा जर्मनीको फ्रयाङ्फर्डमा एनआरएनएको दशौं यूरोपेली क्षेत्रीय बैठक तथा आठौं महिला सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यूरोपमा नेपाली एकता, समृद्ध नेपालको आवश्यकता भन्ने नाराका साथ शुरु हुने सम्मेलन गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको आगामी विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने भएको छ । तर, औपचारिक एजेण्डा भने अन्य नै तय गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको भवन निर्माण, नीतिगत छलफ...बाँकी
रेलले किचिएर तीन नेपालीको मृत्यु
विराटनगर । सीमावर्ती भारतको जोगवनीमा गुडिरहेको रेलबाट किचिएर गएराति तीन नेपालीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा मोरङको कदमाहा–८ का २५ वर्षीय रमेश शर्मा, जुडीघाट–८ का १६ वर्षीय राजु ऋषिदेव र धनुषा सिग्याहीमडानका २६ वर्षीय विनोद यादव रहेको सीमा प्रहरी कार्यालय जोगवनीका प्रहरी नायब निरीक्षक फिरोज चौधरीले जानकारी दिए । प्राप्त जानकारीअनुसार मङगलबार राति ८ बजे तीनैजनालाई उनीहरु चढेको को १७ प ३६९३ नम्बरको मोटरसाइकल रेलको लिकबाट पार गर्न खोज्दा सोही समयमा तीव्रगतिमा आएको रेलले किच...बाँकी
अलविदा कमरेड शशीधर !
March 09, 2017 Posted by Jhilko.com
तनहुँ जिल्ला घर भई भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली नजिकैको औद्योगिक शहर फरिदावादस्थित एउटा प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्ने शशीधर जैसीको गत २७ फेब्रुअरीका दिन निधन भयो । उनी ५३ वर्षका थिए । उनी ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) र त्यसको भारत प्रवासको भातृ संगठन अखिल भारत नेपाली एकता मञ्च, फरिदावादमा विगत तीन दशकदेखि क्रियाशील थिए । फरिदावाद र त्यस वरपर बस्ने नेपालीहरुमाझ शशीधर जैसी एउटा सुपरिचित नाम थियो । नेपाली एकता मञ्चको केन्द्रीय समितिमा तथा पार्टीको जिल्ला तहमा संगठित इमान्दार कार्यकर्ता जैसीका दुवै मिर्गा...बाँकी